Bamboo Cutlery, Cpla Utensil, Cutlery Combo Set - Gianty
TINOGONESESA RAKO RUNYAYA DZAKANAKA
Gianty chigadzirwa chakabatanidzwa zvizere neye-imba dhizaini, prototype kuvandudza, uye kugadzirwa kwechigadzirwa. Iyo kambani yakavaka Elite R&D timu nehunyanzvi hunyanzvi inoshanda muomputa engineering, bioplastics research, uye prototype development. R & D timu inoitisa uye inoshandisa research yesainzi kuvandudza zvigadzirwa zviripo nekugadzira zvigadzirwa zvitsva kuti vabatsire vatengi. Ruzivo indasitiri ruzivo uye hunyanzvi hunobatsira kugadzira zvigadzirwa zvinoenderana nekusangana chaiko pamisika.
HERE ZVINOKOSHA ZVINOGONA KUPINESA-ZVAKANAKA ZVESE
EU Yakatenderedzwa Ehupfumi Chekuita Chirongwa inodzosera zvakare dhiza yepasi-inoshamwaridzika kutakura
European Commission yakatora danho idzva reSystem Yehupfumi Chekuita mukati marino rinotarisira kudzikisa kuwanda uye kurongedza tsvina, kutyaira kugadzirwa kwekudzoreredza uye kurongedza kurongedza uye kuderedza kuoma kwezvinhu zvekutakura. Urongwa, hunowonekwa neKomisheni seimwe ye ...
Ratidziro Yekuongorora Gianty
Mwaka wadarika, takapinda muCanton Fair, NRA muChicago uye PLMA muAmsterdam. Mwedzi wapfuura takangopinda HRC kubva kuMar 3rd-5th - yeUK yakakura kwazvo uye yakakurumbira chiitiko. Iyo UK yezvinhu zvekushandira uye yekushambadzira indasitiri inozivikanwa pasi rese sekuve kumberi ...
GUTI ZVINOKOSHA ZVINONYANYA-KUKOSHESA ZVAKAWANDA DZESVONDO
CPLA Inogona Kucheka Kucheka Retail Bhokisi neDispla ...
CPLA Plastiki-isina Sustainable Inogadziriswazve Kutemwa ...
CPLA + Bamboo Chekudyara-chakavakirwa Yakakwana Plastiki-yakasununguka ...
CPLA Chirimwa-chinogadziriswa Chipurasitiki-chisina kugadziriswazve ...
100% Bamboo Yakasarudzika Yakagadziridzwa Compostable Cutlery